Iitattoo zonyawo lwabafazi-Uyilo, iintsingiselo kunye nokunye | Ukuzoba
Iitattoo ezinyaweni zabafazi
USusana godoy | | Iitattoo zeqatha
Xa sicinga ngenye yezona ndawo zibhalwe kakhulu, indawo yeenyawo iza engqondweni. Ukusuka kwi-instep ukuya kwimimandla esecaleni okanye ukogquma iqatha, zizimvo ezamkelwe kakuhle ngabo bonke. Inkqubo ye- iitattoo ezinyaweni zabafazi zinokwahluka kakhulu, nangona inyani kukuba zininzi izimvo eziphindaphindwayo.
Namhlanje siza kukubonisa ukuba zeziphi ezo zoyilo okanye izimvo ezifunwa kakhulu, kunye nokuphendula loo mibuzo isisiseko xa ucinga ngokuzazisa ngetattoo ezinyaweni zakho. Uya kufumanisa ukusuka kweyona ilula kwaye ilayishwe ngophawu olukhulu, Abanye bayasebenza kancinci kodwa ngesiphumo sokugqibela esimangalisayo.
1 Iitattoo ezinyaweni zabafazi, ezona zifunwayo emva koyilo
2 Iitattoo zonyawo, ngaba ziyenzakalisa?
3 Iitattoos kwi-instep nasecaleni
Iitattoo ezinyaweni zabafazi, ezona zifunwayo emva koyilo
Kucacile ngoku ukuba sonke asicingi ngendlela efanayo. Sonke sinokhetho lwethu kunye nangaphezulu, ukuba sithetha ngetattoos. Kodwa xa sithetha ngokubanzi, sinokuthetha malunga ezinye zoyilo zezona ziphindaphindwayo. Xa sithetha ngetattoo zonyawo kwabasetyhini, kufuneka sithethe ngamabhabhathane kunye neentyatyambo. Bangaya ngokwahlukeneyo, okanye kunye.
Inambuzane luphawu olucacileyo lobufazi Kunye nobuhle. Kodwa ukongeza, ikwayinto enye nobomi obuhle njengesibini. Kwelinye icala, iintyatyambo nazo zinentsingiselo yobuhle, ke, kuxhomekeke kwintyatyambo ngokwayo, inokuba nayo neesimboli ezintsha. Bangabonisa uthando kunye nothando kunye nobunyulu phakathi komzimba nomphefumlo. Umhlambi weentaka okanye weentaka lukhetho olukhulu. Siyazi ukuba bafuzisela inkululeko, ukuqala ngokutsha nokukhetha indlela yakho.
Ewe, iisimboli zikwasisiseko sale ndawo yomzimba. Yindlela yokukhetha i-tattoo enobulumko ngakumbi. Ukusuka kwisimboli engapheliyo yeklasikhi kubo bonke abo bathwala ngaphakathi kwabo inkcubeko kunye nezithethe zamanye amaxesha. Nangona kuncinci, uhlobo lweetattoos ezincinci Zihlala zibonwa kule ndawo yomzimba. Imigca okanye iinkcukacha zejiyometri esizithandayo kakhulu. Kodwa ngaphandle kokulibala imizobo yomlomo, ukubamba amaphupha okanye abo besizwe.
Iitattoo zonyawo, ngaba ziyenzakalisa?
Ngoku, mhlawumbi, sele ukhethe uyilo, omnye umbuzo omkhulu uyeza. Intlungu ihlala iyinto eza kubakho xa sisiya kufumana umvambo. Ayinamsebenzi nokuba yeyiphi na loo ndawo, kuba ngokuqinisekileyo umbuzo omnye uya kuhlala ekuhlasela. Kodwa ke, xa sithetha ngamalungu anjengonyawo okanye iqatha, izinto zinokwahluka kancinci. Kwabaninzi, yenye yeendawo ezibangela eyona ntlungu. Ewe oku kuyathandeka. Kukho abantu abonzakeleyo kodwa ngokuqina kancinci kwaye abanye bayaqonda ukuba ayiyonto imbi leyo.
Kuya kufuneka uyithathele ingqalelo imbambano yeentlungu, kodwa ungasoloko uzithatha ziye kwindawo ekuchaphazela ngayo. Ngaphezulu kwayo nantoni na kuba njengoko sisitsho, wonke umntu unentlungu eyahlukileyo. Ewe ewe, yindawo enesikhumba esibhityileyo. Ngokukodwa eqatheni kwaye apho kuya kwenzakala kancinci. Ngendlela efanayo, akusoloko kulula ukuphilisa kwiitattoo zonyawo. Yindawo ekufuneka igcinwe kakuhle, kuba itattoo ingathatha ngaphezulu kweeveki ezintathu ukuze iphiliswe. Ngaphandle koku kwaye ucinga ukuba iyakuphiliswa, isenokungabi njalo. Ke kufuneka kuthathelwe ingqalelo enkulu.
Iitattoos kwi-instep nasecaleni
Sitshilo indawo yeqatha kwaye, ewe, i-instep yenye yeendawo ezifanelekileyo zetattoo. Ewe, kufuneka sithethe ngentlungu kwakhona. Kuba nabo bayonzakala kule ndawo, ke kuya kufuneka uyithathele ingqalelo. Ukanti, zikwanazo neenzuzo ezininzi kuba yindawo onokuthi ujongeke uyonwabile okanye uyigubungele xa uziva ngathi uyayithanda. Kule ndawo, zoyilo zihlala zinemilo yoxande, nangona kusengqiqweni, kuya kuxhomekeka kuhlobo lomzobo owukhethileyo. Iintyatyambo, izidiliya okanye iintsiba zinokubonakala kakhulu kule ndawo.
Eqatha okanye e icala icala siza kufumana uyilo oluthile. Ezo zifika ngohlobo loonobumba okanye ezinamagama zixhaphake rhoqo. Isithuba esifanelekileyo sokwenza uyilo kunye neemilo ezinde kunye ezilula. Ungayonwabela into ethe kratya kwaye elula, njengokukhetha imibala kunye nobukhulu obukhulu. Ukhetha ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitattoos zivuliwe » Iitattoo zeqatha » Iitattoo ezinyaweni zabafazi
Ukuba ndifumana itattoo elunyaweni lwam ngenjikalanga yangoMgqibelo, ndinganxiba isihlangu ngoMvulo?
USusana godoy sitsho
Ngokufanelekileyo, kwiintsuku zokuqala kufuneka unxibe izihlangu ezikhululekileyo, ezinje ngeembadada okanye izihlangu ezikhululekileyo nezenziwe ngezinto eziguqukayo. Kule nto, sukucinezela indawo ye tattoo. Kuba into esiyifunayo kukuba iphilise ngokukhawuleza. Khumbula ukuba unyawo luya kuthabatha iintsuku ezimbalwa. 🙂
Joker Boy: enye imodeli eya kukukhumbuza utshaba lukaBatman
Izandla ezimanyeneyo iitattoos: ubuzalwana kunye nomanyano